Môzambika - Wikipedia
18°58′00″S 44°14′00″E﻿ / ﻿18.966670°S 44.233330°E﻿ / -18.966670; 44.233330
República de Moçambique ((pt))
Repoblikan'i Mozambika ((mg))
Teny ofisialy Portogey¹
Tanàna lehibe indrindra Maputo
- hakitroka faha 52
22 061 451 mpo.
Anaran'ny mponina Mozambikana,
Sandam-bola Metical (MZM)
Hiram-pirenena Patria Amada
I Môzambika, na Repoblikan' i Môzambika, amin' ny fiteny pôrtogey dia Moçambique sy República de Moçambique, dia firenena aty Afrika Atsinanana, eo amin' ny morontsiraka atsinanan' i Afrika, manana morontsiraka ao amin’ ny Ranomasimbe Indiana, izay manana velarana 799 380 km². Ireo firenena mamaritra azy dia i Afrika Atsimo, i Soazilanda, i Zimbaboe, i Zambia, i Malaoỳ ary i Tanzania.
Ny fiteny pôrtogey no fiteny ôfisialin' i Môzambika. Ka ankehitriny i Môzambika dia firenena mpikambana ao amin' ny Fikambanan' ny firenena miteny pôrtogey ary firenena mpikambana amin' ny Fikambanana Iraisam-pirenen' ny Frankôfônia koa.
Nandalo tao amin' ny faritra misy an' i Môzambika ankehitriny i Vasco da Gama tamin' ny 1498, fandalovana azo vakiana ao amin' ny tononkalo Os Lusíadas; nanomboka nozanahan' i Pôrtogaly i Môzambika nanomboka tamin' ny taona 1505. Nahaleotena tamin' i Pôrtogaly tamin' ny 1975 i Môzambika ary lasa Repoblika Entim-Bahoakan' i Môzambika taty aoriana. Nisy ady an-trano lehibe tao Môzambika nanomboka tamin' ny taona 1977 ka izay tsy tapitra raha tsy tamin' ny taona 1992.
Ny anarana hoe Moçambique dia avy amin' ny anarana arabo Musa ben Mbiki; mpivarotra arabo izay tonga voalohany tao amin' ny Nosin' i Môzambika.
Somary lavalava manaraka ny morontsiraha ny tanin’ i Môzambika ka ny 40 %n’ izany tany izany dia tany lemaka. Ny vohon’ ny tany afovoany dia miakatra miankandrefana ka mamorona ireo lembalemba maro. Ahitana renirano sy ony miisa mihoatra ny valopolo ny ao Môzambika, ka mihoatra ny roapolo ny lava indrindra. Ny korian-drano azo anaovana fitaterana dia ny ony Zambeze. Ny 40 %n’ ny tanin’ i Môzambika dia rakotra ala. Ahitana biby maro karazana ny ao Môzambika ka anisan’ izany ny zebra, ny bofalo, ny tokantandroka (rinôserôsy), ny jirafa, ny liona ary ny elefanta.
Ny toekaren' i Môzambika ankehitriny dia mifototra amin' ny fambolena, izay sahanin' ny 80 %n' ny mponina. Ny ankamaroan' ny vokatra azo avy amin' ny fambolena dia hanin' ny mpamboly azy. Ny lanjan' ny fambolena ao Môzambika amin' ny PIB dia 25 % monja, nefa ny sampandraharaha mampiasa latsaky ny roapolo isan-jato dia 40 %n' ny PIB.
Mihoatra ny vola azo amin' ny famoahana entana mankany ivelany ny vola ilaina amin' ny fanafarana entana avy any ivelany, fa mihakely ny fihatahana. Mitombo ary manomboka manan-danja ny fidiram-bola avy amin' ny fizahantany, nefa mbola latsaky ny tokony ho vita izany.
Nampihena ny fahantrana ao Môzambika ny fahaizana mitantana ny toekarena amin' ny lafiny fampihenana ny trosa ivelany sy ny fampiasana ny fahaizan' ny olona.
Na dia nisy aza ny rivo-doza sy ny tondra-drano tamin' ny fanombohan' ny taona 2000, ary na dia nihena 2,1 % aza ny fitomboan' ny PIB, nitombo 7,9 % isan-taona ny PIBn' i Môzambika tamin' ireo taona 2001-2010 araka ny gazetiboky the Economist sy ny FMI; mbola hitombo 7,7 % isan-taona ny PIBn' i Môzambika amin' ireo taona 2011-2015. Anisan' ny firenena mitombo harena haingana indrindra i Môzambika tamin' ny folo taona lasa teo ary amin' ny dimy taona ho avy, mbola ho anisan' ny firenena folo hitombo harena haingana indrindra i Môzambika .
Ankehitriny, na dia misy ihany aza ny ezaka atao hanala ny fahantrana, dia mbola anisan' ny firenena mahantra indrindra i Môzambika araka ny nambaran' ny gazetiboky maromaro.
Ahitana vondrom-poko maro ny ao Môzambika, ka ny maro anisa indrindra dia ny Makoa-Lômoe (Makua-Lomwe) izay mahatratra 50 %n’ ny mponina, sy ny Tsônga izay 25 %. Ny antsasaky ny vahoaka môzambikana dia manaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista. Ny 30 % no Kristiana ary ny 20 % Miozolmana.
Tamin' ny Andro Antenatenany, betsaka ny fifanankalozana ataon' ny Arabo sy ny Persana ao amin' ny morontsiraka atsinanan' i Afrika ary ao amin' ny morontsiraka andrefan' i Indônezia. Kapiteny persana, Ibn Shahriyar, ao amin' ny bokiny Livre des merveilles de l'Inde dia nanoratra ny ny tantaran' ny mpivarotra Ibn Lakis tamin' ny taona 945 nahita "sambo arivo" nambaran' ny Waq-Waq avy amin' ny nosy eo alohan' i Sina" nitady entana ary andevo "zeng", teny arabo manondro ireo mponina amin' ny morontsiraka atsinanan' i Afrika.
Efa nivadika Miozolmana ny ankabeazan' ny mponina.
Lemba (vahoaka) -
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môzambika&oldid=1040811"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:17
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:17 ity pejy ity.